Relax Foot Spa - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
"Head Toa Toe Massage & Foot Reflexology"
Open Daily : 11:00 am - 11:00 pm
No.(91/105), D-1, Min Ye Kyaw Swar Road, (Near Taw Win Center & Panda Hotel & UMFCCI),
ဖုန်းနံပါတ် - 09781116800
ဤ VIP Card ဖြင့် Service များအားလုံးတွင် 10% Discount ရယူလိုက်ပါ
Your Fitster VIP Card ဖြင့် Service များအားလုံးတွင် 10% Discount ရယူလိုက်ပါ။
Relax Foot Spa တွင် Your Fitster ၏ ဤ VIP Member Card ပြရုံဖြင့် Service များ အားလုံးတွင် 10% Discount ရယူလိုက်ပါ။
- Foot Reflexology with Medical Jelly Foot Bath
- Head to Toe Massage with Medical Jelly Foot Bath
ဤ Discount သည် Relax Foot Spa ၏ အခြား Discount များနှင့် ရောနှောအသုံးပြု၍မရပါ။
ဤ Discount အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက Relax Foot Spa ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ Discount တွင် Usage Policy နှင့် Terms & Conditions များရှိနိုင်သည်။
Foot Reflexology (60mins)
ခန္တကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးကအကြောတွေက ခြေဖဝါးမှာစုနေတာပါ ။ ခြေဖဝါးကို ရေနွေးစိမ်ပြီး၁ပတ်၁ခါပုံမှန်နှိပ်ပေးရင် ကျန်းမာရေးအတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့အပြင် အိပ်မပျော်သူများအတွက်ပါအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ နှိပ်ရာမှာ နှိပ်ကွက်နေရာမှန်ဖို့တော့လိုတယ်ရှင့်။
Head to Toe Massage (90mins)
ခေါင်း -ကျော -လက်မောင်း- ပေါင် -ခြေသလုံး -ခြေဖဝါး -ခေါင်းစခြေဆုံး point ထိမိအောင်နှိပ်ပေးခြင်း ။ အပေါ်ပိုင်းအခြောက်နှိပ် ။အောက်ပိုင်း နှိပ်လျှင် အညောင်းပြေဆီနဲ့နှိပ်လို့ရတဲ့အပြင် အသားနုအိစေသော cream နဲ့လည်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်ရှင်။
(ခေါင်းစခြေဆုံးဆီဖြင့်နှိပ်နယ်ပေးခြင်း) စံပယ်ရနံ့သင်းတဲ့အခန်း မီးရောင်မှိန်မှိန် သာယာငြိမ့်ညောင်းတဲ့သံစဉ်တွေနဲ့ နူးအိတဲ့နှိပ်ကုတင်ပေါ်မှာခေါင်းစခြေဆုံးဆီဖြင့်နှိပ်နယ်ရင်း တနေ့တာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ စိတ်ဖိစီးမှုတွေပြေပျောက်ဖို့ Relax ဆိုင် အနှိပ်ပညာရှင်များမှ ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။
ခြေ (သို့) လက်အသားဖြူပေါင်းတင်
ကိုရီးယားမလေးတွေလိုလက်မောင်းခြေသလုံးဖြူဖွေးချင်ပါသလား?？？(အသားဖြူဆေး ။ အသားဝင်းရန်ရွှေမှုန့် ။အသားကြည်ရန် ရေညှိ စသည်တို့ပေါင်းစပ်ပြီး ပေါင်းတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်) ဆိုင်နဲ့နီးနီးနားနား (ရွှေလမင်းဆေးရုံအနား) စံပြရုပ်ရှင်ရုံမှာရုပ်ရှင်လာကြည့်ရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်( စံပြမှ၁မှတ်တိုင် အကွာ ) တော် ဝင်စင်တာမှာရှော့ပင်ပတ်ပြီးညောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် (တော်ဝင်မှကားတကွေ့စံပြမှလာလျှင်တာ်ဝင်စင်တာမရောက်ခင်လမ်း) ဝါးတန်းလမ်း Feel ဇလုံထမင်းသုပ်, Ykko ကြေးအိုး,New Doreen, ရှမ်းရိုးရာ လာစားရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် (၃မိနစ်လမ်းလျောက်) ကိုယ်ရောစိတ်ပါလာရောက်အနားယူဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။
Relax Foot Spa မှ ထုတ်ကုန်များ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ
No.(91/105), D-1, Min Ye Kyaw Swar Road, (Near Taw Win Center & Panda Hotel & UMFCCI)
Relax Foot Spa မှ ပရိုမိုးရှင်းများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ
Relax Foot Spa မှ ဗီဒီယိုများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ